apple iphone 11 vs xr vs 8 plus bhatiri bvunzo yehupenyu, unofanirwa kukwidziridza?
Kuru Nhau & Ongororo Apple iPhone 11 vs XR vs 8 Plus bhatiri bvunzo bvunzo, iwe unofanirwa kukwidziridza?
Iyo nyowani iPhone 11, sekungofanana neyakatangira iyo XR, iine ho-hum yekuratidzira resolution ye868x1792 pixels, ichidzosa 326 pixels pa inch padiki, kana kungokwana kunzi 'Retina.' Iyo 5.5 'iPhone 8 Plus, kana ichienzaniswa, ine' average 'yanhasi & apos; s zviyero 1080p kuratidza iyo ichiri mitambo yakakwira 401ppi pixel density kupfuura iyo 6' iPhone 11.
Tichifunga kuti pixel kuwanda kwesimba rekuratidzira ingangodaro iri mhosva hombe kuseri kwehupenyu hwebhatiri misiyano, zvimwe zvinhu zvese zvakaenzana, izvo zvichienzaniswa yakaderera screen resolution yegumi neimwe inoshanda kune imwe isingarambike mukana - foni & apos; bhatiri hupenyu.
Apple yakanyorwa zvirevo zvepamutemo zvebhatiri nenzira ye 'kusvika' maawa gumi nemashanu ekutsvaga paInternet uye maawa gumi nematanhatu evhidhiyo-kubheja iyo XR. Kwete izvozvo chete, asi Apple yaidada nezvayakawana neiyo iPhone XR & apos; s hupenyu hwebhatiri, zvekuti inonongedzera iyo 'inotora kusvika 1.5 maawa akareba kupfuura iPhone 8 Plus' tidbit kwese kwese, sezvo iyi yaive yayo yekutanga marathon mumhanyi yekuda ku.
Apple iPhone 11 hupenyu hwebhatiri vs iPhone XR vs 8 Plus
Pinda iyo iPhone 11 ine bhatiri rayo hombe uye inoshanda zvakanyanya A13 processor iyo, zvechokwadi, inokwenenzvera hupenyu hwebhatiri reXR & apos, sekureva kweApple & apos; yekuyedza kwemukati, kunyangwe neawa imwe chete mukutamba kwevhidhiyo. Nehurombo, gore rino Apple yakamira kuburitsa bvunzo yeInternet, kuti igone kuzvirumbidza ne '5 mamwe maawa' bhatiri yeiyo 11 Pro Max ichienzaniswa neXS Max.
Kubhurawuza kazhinji kunoreva kuwanda kwemavara pane chena kumashure, uye kuratidza chena ndiyo yakaipa mamiriro ezvinhu ekuratidzwa kweOLED maererano nemagetsi dhizaini, saka mutsauko uripo pakati pePro Max neyakatangira ingadai yakave iri diki kwazvo kupfuura maawa mashanu akashambadzirwa.
Ndokusaka takafunga kumhanyisa bvunzo yedu yekubhurawuza, patinosunungura mawebhusaiti anozivikanwa zvisingabvumirwe kunze uye kutevedzera maitiro ekupururudza, kuyera iro rechokwadi bhatiri hupenyu hweiyo iPhone 11 pamberi peXR uye 8 Plus. Ngatisakanganwei kuti zvese izvi zvine LCD zvinoratidzira, izvo zvisina matambudziko akafanana nemaOLED pakuratidza chena, saka tichipinda takatarisira kuti mutsauko uripakati pegumi nemana uye XR uve wakakosha mukubhurawuza kupfuura zvinonyorwa neApple. yeiyo vhidhiyo yekutamba bvunzo.
Bhatiri / Pixel density / Chipset 3110mAh / 326ppi / A13 (2nd gen 7nm) 2942mAh / 326ppi / A12 (1 gen gen 7nm) 2691mAh / 401ppi / A11 (10nm)
Vhidhiyo yekutamba (Apple bvunzo) Maawa gumi nemanomwe Maawa gumi nematanhatu Maawa gumi nemana
Kushandiswa kweInternet (Apple bvunzo) n / a Maawa gumi nemashanu Maawa gumi nematatu
YouTube inotamba (PA bvunzo pa200 nits) 7h 13m 5h 50m 5h 23m
Kutsvaga 11h 25m 11h 08m 9h 58m
Sezvauri kuona, iyo chete 6% bump mune bhatiri kugona pakati peiyo iPhone XR uye iPhone 11 mhedzisiro mukuenzanisira kudiki kuwedzera mukubhurawuza kutsungirira. Yedu YouTube yekutamba bvunzo, zvisinei, zvakakonzera Apple & apos; s inoshambadzwa awa yehupenyu hwebhatiri zvakanyanya, uye shanduko.
Mukushandisa kwakasanganiswa, senge mune yedu nhaka bhatiri bvunzo, iyo iPhone 11 yakatsanangurawo iyo XR neinopfuura awa, ichiratidza kuti panogona kuve nezvakawanda pakutsungirira kwayo kupfuura kuyerwa 2942mAh vs 3110mAh bhatiri pack rinowedzera.
Hupenyu hwebhatiri(maawa) Yakakwirira iri nani Apple iPhone 11 13h 29 min(Zvakanaka) Apple iPhone XR 11h 1 min(Zvakanaka) Apple iPhone 8 Uyezve 10h 35 min(Zvakanaka)
Kutengesa nguva(maminitsi) Pazasi zviri nani Apple iPhone 11 213 Apple iPhone XR 192 Apple iPhone 8 Uyezve 178
Ndeapi & apos; s seri kuri nani bhatiri hupenyu hweiyo iPhone 11 uchienzaniswa neiyo XR? Tichifunga kuti isu tine imwecheteyo LCD inoratidzira, uye negligible bhatiri rekukura kukura, inogona kunge ichidonha kune iyo nyowani A13 chipset yakavakwa neyechipiri-gen 7nm maitiro.
Anandtech munguva pfupi yapfuura akaisa iwo maviri machipset pabvunzo, uye akaona kuti iyo A13 iri inenge 25% inoshanda zvakanyanya kupfuura iyo A12 paavhareji, kunyangwe ichikurumidza zvishoma pane yakatangira. Ichokwadi, processor inoshanda inorema zvishoma mukushandisa kwesimba kwefoni, zvichienzaniswa neiyo dhizaini, asi zvinokwana musiyano pakati peA12 neA13 kuti uwane mari muhupenyu hwebhatiri kune iyo bhodhi yeiyo iPhone 11 pamusoro pe XR.
Unofanira kukwidziridzira kune iyo iPhone 11?
Iyo iPhone 8 Plus, kune rimwe divi, chibvumirano chakanaka chakakanganisika pamusoro pemaoko matsva - kuratidzwa kwayo, kunyangwe iri diki, ine huwandu hwepikiseli hwepamusoro, bhatiri rayo kugona idiki, uye processor yacho 10nm imwe vs iyo mbiri 7nm chipsets muXR uye 11.
Ah zvakanaka, poindi yese yeiyi hupenyu hwebhatiri kuenzanisa ndeyokuratidza zvaunowana kana iwe urikubuda mukati memakore maviri eApple 8 Plus ekubhadhara zviketani, uye kusvetukira kune iyo nyowani iPhone 11 chingave chakakosha kusimudzira mukutsungirira pane kuchaja zvirokwazvo.
samsung galaxy s5 kugadzirisa 2017
Samsung Gear IconX 2018 mahedhifoni Ongororo
T-Mobile & apos; s handset inishuwarenzi mitengo inoshanduka musi waKurume 1
Square Enix kuvhura itsva yemahara-yekutamba Hitman nhare mbozha
Chii chichaitwa neRetina kuratidza kune iyo mini mini 2?